Malaga 2015 Preview: Juan Rodrigáñezမှ "Der Geldkomplex" အားလပ်ခွင့်ပေးပါ
Juan Rodrigáñezမှ "Der Geldkomplex"
ရုပ်ရှင်ရုံ | | Cine, ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များ
«Der Geldkomplex"Juan Rodrigáñez, သို့မဟုတ်"ငွေကြေးရှုပ်ထွေးသည်»စပိန်မှာငါတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ အဲဒါကိုတင်ပြမှာပါ မလagaပွဲတော်.
ရုပ်ရှင်သည်၎င်း၏ဒါရိုက်တာ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်စတင်ပွဲ ဦး ထွက်သည်၊ ဤခွဲခြားမရနိုင်သောလက်ရာဖြင့်သူ၏ပွဲ ဦး ထွက်ကိုပြသသည်။
“ Der Geldkomplex” ကဏ္ourတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၌တင်ပြပါလိမ့်မည် ZoneZine ယခုနှစ်ဧပြီလ ၁၇ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိကျင်းပမည့် ၁၈ ကြိမ်မြောက်စပိန်ရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲ ယခင်ကရုပ်ရှင်သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေမှု၌ကမ္ဘာကိုပြသခဲ့သည် ဘာလင်.
ရုပ်ရှင်၏တရားဝင်အနှစ်ချုပ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ 'ရာဖေးလ်ရဲ့သားကသူ့ရည်းစားကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အစီအစဉ်တွေကိုကြေညာဖို့မိသားစုလယ်ယာကိုပြန်လာတယ်။ သူ့အဖေရဲ့အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေလည်း Francisca, Henry, Lucas နဲ့ Domingo တို့အားလုံးလိုလိုငွေသားရှုပ်ထွေးမှုရဲ့သားကောင်များဖြစ်ကြပါတယ်။
ဟွမ်ရိုဒရီဂွက်ဇ် "Der Gelkomplex" အတွက်အမည်မသိသရုပ်ဆောင်များအပါအ ၀ င်သရုပ်ဆောင်များပါ ၀ င်သည် Lola Rubio, Gianfranco Poddighe, rafael lamata, Edward Mont de Palol, Jorge Dutor ဖြစ်သည် o Katrin Memer.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အားလပ်ခွင့်ပေးပါ » Cine » ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များ » Juan Rodrigáñezမှ "Der Geldkomplex"
Sínkope: "Rosendo သည် rock ၏အဖေ"
Whitesnake သည် Deep Purple မှသူ၏ "Burn" ဗားရှင်းကိုတင်ဆက်သည်